emazweni angaphezu kuka-60 emhlabeni wonke Gorenje waziwa futhi lifanelwe nokwethenjwa izigidi amakhasimende.
Gorenje: High-ekupheleni izinga
Izinga nokwethenjelwa izinga okusezingeni kuyinto nomkhiqizi nemishini ekhaya, "Burning". Electric nawo wonke umkhiqizo wenkampani has Izimfanelo eziyingqayizivele.
Manje Gorenje zikagesi ukuze ekhishini obugagu kungemalengiso futsi ubhekwa brand ehamba phambili, nokunikeza usizo Amazing iyiphi ikhishi.
Kusukela ngosuku lokuqala yokuthengisa esikhula ngokushesha kakhulu, ubuchwepheshe buya ngokuya eziyinkimbinkimbi, ngakho kwamiswa inhlangano Inkonzo yokuqala, ukusekelwa zazo kuze kube namuhla, ngesisusa eqinile kukhethwa ekhaya Imishini. Uma kukhona nenkinga futhi idinga ukulungisa amasu "Burning", isitofu, isiqandisi noma umshini wokuwasha ibhekane ephelele uphethwe Yiqiniso kweso, futhi umsebenzi isikhungo service kwenziwa masinya.
Gorenje - inkampani enkulu ukuthi ihlose abe nomkhiqizi esimanjemanje kakhulu ezintsha imikhiqizo nge icebo eliphelele, design esiyingqayizivele, ubuchwepheshe bakamuva nje kanye nezixazululo ezintsha. ubunjiniyela design ubelokhu eqashelwa ngesikhathi imifelandawonye ehlonishwa emhlabeni jikelele. Befuna izixazululo ezintsha inkampani yencike imikhuba kanye nezidingo abasebenzisi.
"Burning" - kagesi ne nqampuna umhlabeleli
ukubukeka Tebuciko kuyinto bokuthi umkhiqizo. Ububanzi kuhlanganisa onobuhle efana isitayela zakudala noma Retro nezanamuhla futhi ngesikhathi esifushane, ngakho iyiphi imodeli uphelele ekhishini enu angaphakathi. Lapho amasu yokukhiqiza asetshenziswa kuphela engcono enokwethenjelwa kakhulu insimbi engagqwali izinto, aluminium namabhodlela, anikeza esiphezulu imikhiqizo umsebenzi eside.
The main imishini ukukhiqizwa itholakala Slovenia, kodwa amanye amamodeli igesi kanye kagesi endzaweni lephephile ekhiqizwa eCzech Republic. Ukuphepha kanye imikhiqizo ephakeme izinga nazo zonke yaseYurophu, futhi yiluphi uhlobo imishini, ezifana, isibonelo, kagesi "esivuthayo", imfundo Operating okuyinto bephethe ngemodeli ngayinye ubhekwa njengoba ephephile ngangokunokwenzeka. sesimanje Okuqhubekayo zokukhiqiza izindawo bese uthuthukisa uhlelo izimo sokukwazi ukuncintisana ezingeni lamazwe, ngakho kufanele enze ukukhetha esivuna ubuchwepheshe "Burning". Electric kuyoba umsizi enkulu ekhishini.
Ukunikezwa kusuka izinkampani Gorenje emangalisayo ahlukahlukene, ngakho ngokuphelele umuntu angaqhubeka inketho yakho ephelele.
Ezahlukene, elinikeza lisebenze kufaka imodeli kokubili bendabuko camera ukupheka surface kanye ne ingilazi-Ceramic yesimanje. A ezihlukahlukene osayizi, ukusebenza kanye izixazululo ikuvumela ukuba ukhethe imodeli ofanele ukuthi uzohlangana zonke izidingo Ukukhetha.
izitofu Electric akuzona usayizi kuphela, kodwa futhi inani kanye nohlobo izitofu, amandla abo, ukusebenza imodi, kusukela ziphethe hlupha umsebenzi avtopovar.
Ukuthenga emhlabeni odumile Gorenje zikagesi - lokhu kuyisinqumo esingcono, lapho ukukhungatheka siqedwa ngokuphelele, futhi kagesi "evutha", ukubuyekezwa zazo eyakhayo ngaso sonke isikhathi kuphela, kuyisipho yangempela yokufuna okukhulu.
Nazi izinhlobo endzaweni lephephile kagesi
Electric isitofu Ukushisa ihlukaniswe ngohlobo ku izinhlobo eziningana:
Ukukhetha isitofu, kufanele sinake ubukhulu namandla we izitofu ngakho ungakwazi ukupheka nge induduzo enkulu futhi ezihlukahlukene okujabulisa eziyizintandokazi zakho Culinary. Ukuze encane kakhulu futhi enesizotha ngobukhulu emakhishini inkampani Gorenje ukhiqiza isitofu nge izitofu ezimbili, okuvumela ukusetshenziswa elilungile endaweni khulula.
Ukupheka evele akhiqizwa ngezindlela eziningana ezahlukene, kuye ngohlobo impahla:
Metal, okuyinto camera nge koqweqwe lwawo. Kuyinto inketho ukonga kakhulu.
I ingilazi-izitsha zobumba. Ukuze lolu hlobo lokuthenga Kunconywa ekhethekile yokuhlanza ejenti kanye bushelelezi for ngokushesha futhi esebenza kahle yokuhlanza ebusweni.
Kohhavini kagesi asetshenziswa kabanzi Ukushisa izakhi kanye fan ihambisa ukushisa lonke ivolumu kuhhavini. Liqinisekisa Ukushisa umfaniswano futhi likuvumela ngokucacile bagcine umbuso lokushisa.
Izinhlobo evele ingilazi-Ceramic
Kunezinhlobo ezimbili zama-ezishelelayo - ezifanayo ngaphandle, kodwa imisebenzi ngokuphelele ezahlukene tech:
Ordinary ingilazi izitsha zobumba.
Lokungeniswa ebusweni okuyinto heats ngqo kuphela phansi endishini, futhi ngokwalo ukufuthelana.
Ngokusho izinga ukupheka in the yesibili wokugcina noyedwa phakathi izitofu kagesi kanye panel, njengoba ngempela futhi izinga yokusabela. Kodwa khumbula ukuthi udinga ukusebenzisa uhlobo oluthile izitsha.
Uma hobs kuhlanganiswe ukhiqize ibhuloho lokungeniswa, endaweni yabo Imininingwane lingasetshenziswa kanyekanye njengoba Ukushisa zone for izitsha ezinkulu. Kulokhu, ebusweni kungaba okwanele ukuze ihlanganise cishe eziyisishiyagalombili izinhlobo Cookware kanyekanye, bafudumale Kwenziwa kuphela endaweni phansi kwabo.
I Gorenje nkampani inyathelisa okungenani uhlakaniphile amasu kuka zesimanje, nje yonke ubuchwepheshe eyinkimbinkimbi kufihlwe ngaphakathi emzimbeni.
Abanye onobuhle eziseqophelweni izitofu kagesi anemisila self-ukuxilongwa amaphutha. It ngokuzenzakalelayo iSifo izinkinga futhi izaziso ezifika ngesikhathi eziphathelene nabo.
Ukulungisa of endzaweni lephephile kagesi "Burning" senziwa izinga emangalisayo okusezingeni eliphezulu. Le nkampani iqasha ochwepheshe ephendukela ukuthi, uthola babonisana okugcwele usizo olufanelekile.
Kodwa ngaphezu izinzuzo eziningi ubuchwepheshe, kukhona umehluko wemisindo nemiqondo yamagama amaningi, okuyilapho abanikazi ukukhiqiza: kokukhetha imodeli ezithile umkhiqizi, kufanele sihlole izinketho for the ingxenye ezibizayo ngoba wanika ukusebenza okukhulu kanye lula ukudlula ukonga kakhulu.
Omunye ethile, lapho agcizelele abathengi indlela esingesihle kakhulu turning namasumpa phezu onobuhle eshibhile. Kodwa ikhwalithi wobuciko asithinteki, ngakho ngokukhetha kukho isabelomali, ungakwazi kalula ukugxila brand adumile Gorenie.
Umshini wokuwasha izitsha "Hans": Izici kanye nokubuyekeza
Isilinganiselwa igesi izitofu. Yiziphi amabhodi kangcono abathengi kanye nochwepheshe